Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ Njem India » Ndị dọkịta India: Ikpuchi onwe gị na nsị ehi agaghị echekwa gị na COVID-19
Omume nke itinye nsị ehi na mmamịrị na akpụkpọ mmadụ ma na-eche ka ọ kpoo, tupu ị saa ya na mmiri ara ehi ma ọ bụ mmiri ara ehi, metụtara ndị dọkịta India.
Ndị dibịa India ekwughachila ịdọ aka na ntị ha megide 'ọgwụgwọ' na 'usoro mgbochi ndị ọzọ
Medicaltù Na-ahụ Maka Ahụ Ike nke India adọọla ụmụ amaala Indian aka na ntị banyere omume nke ikpuchi onwe ha na nri ehi
Nye ndị Hindu, ehi ahụ bụ anụmanụ dị nsọ
Taa, ụbọchị asaa nke ndị India na - agụ maka coronavirus ruru ọnụ ọgụgụ dị elu nke 390,995 dị ka Healthtù Ahụ Ike Worldwa (WHO) kwupụtara ọdịiche dị iche iche nke ndị India nke COVID-19 ịbụ “nchegbu”.
Site na ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ ndị ọzọ ugbua na ebe dị egwu, na a na-enyekwa ihe ikuku oxygen, ndị dọkịta India ekwughachila ịdọ aka na ntị ha megide 'ọgwụgwọ' na 'usoro mgbochi' ndị ọzọ ewu ewu na mba ahụ.
Onye isi ndi otu Indian Indian Association adọọla ụmụ amaala India aka na ntị banyere ịkpuchi onwe ha na nri ehi ka ihe ngwọta maka coronavirus, ka ụbọchị asaa nke mba ahụ na-arị elu.
Omume nke itinye nsị ehi na mmamịrị na anụ ahụ na ichere ka ọ kpoo, tupu ị saa ya na mmiri ara ehi ma ọ bụ mmiri ara ehi, metụtara ndị dọkịta.
"Onweghi ihe akaebe sayensi putara na nsi ehi ma obu mmamiri na aru oru iji bulie oria megide COVID-19, o dabere kpamkpam na nkwenye," Dokita JA Jayalal, onye isi ala nke ndi otu ndi India Indian, kwuru taa.
O kwukwara na enwekwara ihe egwu ahụike dị na itinye mmanụ ma ọ bụ iri ngwaahịa ndị a - ọrịa ndị ọzọ nwere ike gbasaa site na anụmanụ ahụ gaa na mmadụ.
Ndị ahụ na-eme emume ahụ na-amakụ ma ọ bụ na-asọpụrụ ehi ndị ahụ mgbe ngwugwu ahụ na-akpọnwụ, ọbụnakwa na-eme yoga n'ihu ha iji bulie ogo ike.